Boqor Burhaan Boqor Muuse oo Xaflad sagootin ah loogu sameeyay Minnesota – Radio Daljir
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo Xaflad sagootin ah loogu sameeyay Minnesota
Abriil 21, 2015 1:18 b 0
Talaado, Abriil 21, 2015 (Daljir) —Waxaa magalaada Minneapolis ee gobolka Minnesota toddobaadkan dhamaadkiisii lagu qabtay xaflad lagu sagootinayay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo todobaadyadii lasoo dhaafay Minneapolis ku sugnaa.
Xafladda waxaa kasoo qayb-galay qaar ka mida wax-garadka, culumada iyo aqoonyahanka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minneapolis. Waxaana madasha joogay ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, C/weli Sheekh Axmed safar ku jooga gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Intii ay munaasabaddu socotay ayay jaaliyadda Soomaaliyeed u jeediyeen Boqor Burhaan hadallo dardaaran iyo duco ahaa. Waxay kaloo jaaliyaddu guddoonsiisay boqorka hadiyado xanbaarsan dhaqan iyo taariikhda. Sidoo kale indheer-garadkii xafladda ka hadlay waxay Boqorka ku dhiirri-geliyeen inuu u is-taago isku keenidda iyo nabadeynta ummadda Soomaaliyeed.
Xubnihii iyo odayaashii ka hadlay xafladda waxaa ka mida ahaa; Axmed Caddaawe, Siciid Xasan Jaamac, iyo C/qaadar Faarax Shire. Waxaa kaloo xafladda hadal dar-daar iyo dhiirri-gelin ahaa kasoo jeediyay Sheekh Yusuf Qaaddi oo ka mid ah culummada sida weyn looga yaqaan Soomaaliya oo isagu si gaar ah Boqorka ugu duceeyay.
Hala-buurkii munaasabadda kusoo bandhigay sugaanta waxaa iyagana ka mid ahaa Abwaan Dhaga-dheere, Maryan Sheekh Maxamaud iyo Caasho Buraan-burtooy.
Ra’iisul wasaariii hore ee Somalia C/weli Sheekh Axmed oo goobta hadal ka jeediyay ayaa salaan u jeediyay Boqorka iyo martidii xafladda kasoo qayb-gashay, isagoo si gaar ah ugu mahadnaqay beesha Reer Maxamuud oo uu boqorku kasoo jeedo.
Ugu dambeyn, waxaa munaasabadda ka hadlay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo si guud ugu mahad-naqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minneapolis oo xaflado soo dhaweyn ah ku maamuusay toddobaadyadii uu joogay Minnesota. Wuxuuna Boqorku si gaar ah uga mahad-celiyey Beesha Reer Maxamuud.
Boqorku wuxuu ballan-qaaday inuu intii karaankiisa ah ka shaqeyn doono sidii uu isugu keeni lahaa ummadda Soomaaliyeed. Waxayna xafladdani u ahayd gabo-gabo 14 xafladood ay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Minnesota iyo Ohio ku maamusayeen Boqor Burhaan Boqor Muuse.
Dowladaha Maraykanka iyo Kanada oo Soomaalida Koonfur Afrika Magan-galyo siinaya
Shir looga Hadlayay Amniga iyo la dagaalanka Argagaxisada oo dowladda Puntland iyo QM ku dhex-maray Garowe[DHAGAYSO]